YEYINTNGE(ကနဒေါ): Tuesday, August 02
Memoirofa Diva 2011 ဖြူဖြူကျော်သိန်း
02 I Want To Break Free
04 Its All Coming Back To Me Now
Memoirofa Diva 2011 - Phyu Phyu Kyaw Thein by yeyint2011
BY YeYint Nge ... 8/02/20110comment
ချစ်သောဧရာဝတီ( မောင်မောင်ဝမ်း )
by Maung Maung Wann on Tuesday, August 2, 2011 at 9:07pm
ဧရာဝတီဟာတခါကကျနော့်အပေါ်အငြိုးဒေါသကြီးခဲ့ဘူးတယ်…ဒါကလည်းကျနော်ကရန်သွားစတာကိုး… တကယ်တော့…သူဟာစိတ်ရင်းအလွန်ကောင်းပြီး..သဘောထားမြင့်မြတ်သူပါ…ကျနော် ၁၂နှစ်သားလောက် ကျနော့်အဖေဇာတိ မိုးညိုမြို့နယ်အပိုင် ထိန်တောရွာလေးကိုအလည်လိုက်သွားရာက…ဧရာဝတီမြစ်ထဲကို ရေဆင်းကူးတော့..သူကကျနာ့်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဆုံးမလွှတ်လိုက်တယ်….ကျနော့်ကိုသူမသတ်ဘူး…ကတိတခု တော့တောင်းတယ်…မင်းအသက်ကိုငါကယ်လိုက်ပြီတဲ့…ငါ့ကိုလည်းရန်ရှာနေတဲ့သူတွေရှိတယ်….ငါ့ကိုလည်း ပြန်ကယ်ပါတဲ့…..အော်ဧရာဝတီရယ်…သင်ဟာလူများစွာကိုကယ်တင်နေတဲ့သူ…လူများစွာရဲ့အကျိုးစီးပွားကို သယ်ပိုးနေတဲ့သူ…သင့်ကိုဘယ်သူမှပစ်မထားဘူး….( ကျေးဇူးမသိတတ်သူများကလွဲရင်ပေါ့ )။
ဒါပေမဲ့ဧရာဝတီ…ခွင့်လွှတ်ပါ..ကျနော့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ…ကျနော်သင့်ကိုမေ့နေတာကြာသွားပြီ..တနေ့ကမှ ညီငယ် ဗမာ့သွေးက အထိပ်တလန့် တီးတိုးရေရွတ်သံနဲ့လှမ်းပြောရှာတယ်….
စာရေးဆရာမောင်သိန်းဆိုင် ရဲ့နှလုံးသားထဲက--- ဧရာဝတီ
အဆိုတော် ရီရီသန့် ရဲ့-----------------------------ဧရာဝတီ
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီး---------- ဧရာဝတီ
ကိုယ်ကျိုးရှာ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ကွန်မြူနစ်ဇာတ်ပျက်တရုတ်အစိုးရတို့ပေါင်းပြီး အသေသတ်ကြတော့မယ်…..တို့ဘာလုပ်ကြမလည်း………
ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြမလား…ဧရာဝတီဟာ ရန်သူ့လက်ထဲမှာလူးလွန့်ပြီး..အသင်တငင်ငင်နဲ့ရှိနေတာကို….လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာလား……..
(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက် )
ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ (ဥပဒေတွင်းပါတီ)များဖြစ်ကြတဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုပါတီ (NDF)၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP)၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ တို့က လည်း ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကိစ္စကိုအစိုးရအဖွဲ့ကသာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီး သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ အားလုံးကခံယူထားကြတယ် ဆိုတဲ့ ယေဘုယျကျကျပြောဆိုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကအကြံပေးပဲ။ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေမဟုတ်လေတော့။ ဒီထက်ပိုမပြောနိုင်တာမဆန်းပါဘူး။ တခြားစကားပုံ ကလည်းလွယ်လွယ်စဉ်းစားမရဘူးဒီတော့ဒီစကားပုံပဲသုံးလိုက်ရပါတယ်။ “နွားရှေ့ထွန်ကျူး” သလို အကြံပေးတွေက ပြောလို့မဖြစ် ဘူးမဟုတ်လား။
သူတို့ပြော ပြောနေတဲ့ “နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း”လို့ ဆိုရာမှာ အဲဒီ “နိုင်ငံရေးနည်းလမ်း” ဆိုတဲ့ဝေါဟာရရှေ့မှာ “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈)ဘောင်ထဲ”ကဆိုတဲ့စကားပိုဒ်မြှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့အချက်ကို ကျနော်တို့သေသေချာချာနားလည်သဘော ပေါက်ထားရပါမယ်။ ဆန္ဒစွဲမှန်းဆချက် (wishful speculation) တွေနဲ့ ပြောနေ/သဘောပေါက်နေလို့မဖြစ် ဘူး လေ။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရတာကသိပ်မခက်ခဲလှပါဘူး။ အနှစ် ၂၀ လောက်အပစ်အခတ်ရပ်ထားခဲ့နိုင်တာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် အခု သေနတ်သံတွေပြန်ထွက်လာနေရတဲ့ တကယ့်ဇစ်မြစ်အကြောင်းရင်းက တပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရေရှည်တံ့နိုင်ပြီး အာမခံချက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှန်မရရှိခဲ့သေးလို့သာဖြစ်ပါတယ်။
တပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရေရှည်တံ့နိုင်ပြီးအာမခံချက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှန်မရရှိသေးသရွှေ့တော့ “အိတ်ဖွင့်ပေး စာ”ထဲမှာထောက်ပြထားသလို “ပြည်တွင်းစစ်မီးဟူသည်ကျယ်ပြန့်သွားနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိတတ်ပါသည်” ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အခု လည်း ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအတိဒုက္ခများစွာရောက်ကြရပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထဲသို့ပြေးဝင်ခိုလှုံကြရပါတယ်။ ဒီအဖြစ် ဆိုးဟာ “ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့” ကမှစတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးရုံ၊ လက်နက်ချရုံ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF)ဖွဲ့စည်းရုံ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရုံ လောက်နဲ့တော့ တပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရေရှည်တံ့နိုင်ပြီးအာမခံချက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှန်ကို တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀၀၈) ကိုလက်ခံကြ၊ ဖွင့်ပေးထားတဲ့ တံခါးပေါက်က ဝင်ခဲ့ကြဆိုတာနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာမှာလည်း“လွှတ်တော်ထဲ”အရင်ဝင်ပြီးမှသာပြင်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ “လွှတ်တော် ပြင်ပနည်း” နဲ့လည်းပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ ပြောင်းလဲလို့ရ ပါတယ်။ လူကရေးထားတဲ့ ဥပဒေကို လူက ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
ဦးဝင်းတင်က အခုလိုယူဆတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ “သူ့ရဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုသုံးပြီးတော့ နိုင်ငံရေးခွင်ထဲကိုခြေစုံပစ်ပြီးဝင် လာခြင်းဟာအလွန်ရေးကြီးတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်”
ဒီလိုဆောင်ရွက်လိုက်တာမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ NLD ကိုချန်ထားခဲ့သလိုဖြစ်ပါတယ်။
“၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD၊ ၁၉၉၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်”စတာတွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု သီးခြားခွဲထုတ်တည်ရှိနေနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်ကတော့တွေးမြင်ယုံကြည်ခဲ့သူပါ။ ယုံကြည်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိနေသော်လည်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ညီညွတ်ရေးမရရှိသေးဘူးဆိုတာ ပကတိတည်ရှိနေတဲ့ အရှိတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) နဲ့ အားလုံးအကြပ်ကိုင်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့်တပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရေရှည်တံ့နိုင်ပြီးအာမခံချက်ရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်အမှန်ရရှိဖို့ကတော့ တမျိုးသားလုံး အကျိုးစီးပွားအတွက် ဒီမိုကရေစီအတိုင်းအတာဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိပြီး၊ ဘယ်လောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်/မရှိ ဘူး ဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာသာအဓိက မူတည်နေပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) ကိုလက်ခံခြင်း/လက်မခံခြင်းဆိုတဲ့အချက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရနိုင်ပါဘူး။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောတို့ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ “ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကြီး” ရဲ့ “ရပ်တည်ချက်နဲ့သဘောထား” ကို အခုလိုလေ့လာဖတ်ရှုရပါတယ်။
“ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဟာ ပွဲစားမဟုတ်၊ နှစ်ဖက်ကြားကဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့လည်းမဟုတ်၊ ပြည်သူလူထုအကျိုးဆန္ဒ နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိစေဖို့ ပြည်သူလူထုကို အခြေခံပြီး ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်”
“ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကို ရဘို့ဆိုယင်လဲ အဓိကအင်အားစုကြီးဟာ ပြည်သူလူထုဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်သမိုင်းမှာ မဆိုကြီးကျယ် တဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးများဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်ခဲ့ပါ၊ ပြည်သူလူထုဟာမိမိတို့အကျိုးအတွက် စည်းရုံးညီညွတ်ကြပြီး တိုက်ပွဲဝင်မှသာရနိုင်ပါတယ်၊ပြည်သူလူထုစည်းရုံးမှုနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်မှုမပါတဲ့ပြောင်းလဲမှုများဟာ သမိုင်းရာဇဝင်မှာ မရှိခဲ့ပါ” တဲ့။
ကိုးကား - ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးသဘောထား - အောင်မျိုး - စာပုံနှိပ်တိုက်၊
- ဦးဝင်းတင်နဲ့စကားပြောခြင်း (RFA) ၁ သြဂုတ်၂၀၁၁
2 August 2011 Yeyintnge's diary.doc
658K View Download
2 August 2011 Yeyintnge's diary.odt
2 August 2011 Yeyintnge's diary.pdf
373K View Download
ဘဏ်တိုး​နှုန်း​လျှော့​ချ​ပေး​ရန် ​တောင်း​ဆို​နေမှုနှင့်​ပတ်သက်ပြီး​ ​မေး​မြန်း​ချက်
Published on August 2, 2011 by ရွှေအောင်
ပြည်တွင်း ​ရှိ အစိုး​ရဘဏ်တိုး​နှုန်း​တွေဟာ အာဆီယံ​ဒေသတွင်း​နိုင်ငံ​တွေနဲ့​ နှိုင်း​စာရင် မြင့်​နေတာမို့​ ​လျှော့​ချ​ပေး​ဖို့​ ပြည်တွင်း​လုပ်ငန်း​ရှင်တချို့​က ​တောင်း​ဆို​နေကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ​ အစိုး​ရဘဏ်​တွေ​ရော၊​ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်​တွေမှာပါ အပ်​ငွေအတွက် ရတဲ့​အတိုး​နှုန်း​က တနှစ်ကို ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း​ဖြစ်ပြီး​ ​ချေး​ငွေအတွက် ​ပေး​ရတဲ့​ အတိုး​နှုန်း​က တနှစ်ကို ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း​ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဘဏ်တိုး​နှုန်း​ ​လျှော့​ချ​ပေး​ဖို့​ ​တောင်း​ဆို​နေကြတာနဲ့​ ပတ်သက်လို့​
မြန်မာ့​ဓန စီး​ပွား​ရေး​မဂ္ဂဇင်း​ အယ်ဒီတာချုပ် ဆရာသီဟ​စောကို ​မေး​မြန်း​ထား​ပါတယ်။
နိုင်ငံမှာရှိတဲ့​ ဘဏ်​တွေက​တော့​ အတိုး​နှုန်း​တွေ များ​နေတယ်​ပေါ့​။ အဲဒါ အတိုး​နှုန်း​တွေ ​လျှော့​ချ​ပေး​ဖို့​ အကြံပြုတယ်တို့​ ကြား​နေရတယ်။ ဘဏ်အတိုး​နှုန်း​က ဘယ်လိုဖြစ်လို့​လဲ။ အတိုး​နှုန်း​များ​နေ​တော့​ ဘယ်လို​တွေ လုပ်ရ ကိုင်ရခက်လို့​လဲ ဆရာ။
“များ​ တယ်ဆိုတာ သူများ​နိုင်ငံထက်ယှဉ်ရင်​တော့​ များ​တာ​ပေါ့​။ သူများ​နိုင်ငံက ပုံမှန်အား​ဖြင့်​ ​လေး​ရာခိုင်နှုန်း​၊​ ငါး​ရာခိုင်နှုန်း​၊​ ​ခြောက်ရာခိုင်နှုန်း​ အဲဒီလိုသွား​တယ်။ ကျ​နော်တို့​က ဟိုအရင်ကတည်း​က ရှစ်ရာခိုင်နှုန်း​၊​ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း​၊​ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း​ အဲလိုမျိုး​ရှိတယ်။ သူများ​နိုင်ငံထက် နှိုင်း​ယှဉ်ရင်​တော့​ များ​တယ်လို့​ ​ပြောလို့​ရတယ်။ ကိုယ့်​ဟာနဲ့​ကိုယ်​တော့​ ပုံမှန်လည်ပတ်​နေတယ်။”
အဲဒီလိုများ ​နေ​တော့​ သူတို့​က အာဆီယံ စံချိန်စံညွှန်း​ပေါ့​။ တခြား​နိုင်ငံ​တွေလိုပဲ ထား​သင့်​တယ်လို့​ ​ပြော​နေတာက ဘာဖြစ်လို့​လဲဆရာ။ လူ​တွေက အလုပ်မလုပ်​တော့​ဘဲ ဘဏ်မှာ​ငွေအပ်ပြီး​တော့​ ဘဏ်တိုး​ကိုပဲ ထိုင်စား​နေမှာဆိုး​လို့​လား​။ ဘာ​ကြောင့်​အဲလို​ပြော​နေတာလဲ။
“အတိုး​နှုန်း​ နည်း​တယ်၊​ များ​တယ်ဆိုတာက ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ နှစ် ၂၀ တုန်း​လောက်က ​ငွေ​ကြေး​ဖောင်း​ပွမှုက ၂၀၊​ ၃၀ တို့​ ​ရောက်ခဲ့​တယ်။ ဥပမာ ​ငွေ​ဖောင်း​ပွမှုက ၂၀ ​ရောက်​နေရင် ဘဏ်မှာ ၁၂ ကျပ်ပဲ ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူပိုက်ဆံ စုချင်မလဲ။ အပြင်က ​ငွေ​ကြေး​ဖောင်း​ပွမှုက များ​နေ​တော့​ ဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံက ရှုံး​တောင်ရှုံး​တယ်။ အဲဒီအပိုင်း​ရှိတယ်။ အခ​တော့​ အ​ကြောင်း​ကြောင်း​တွေ​ကြောင့်​မို့​ ​ငွေ​ဖောင်း​ပွမှုက ၁၀ ​အောက်ကို ​ရောက်သွား​တယ်။ ဒါက အ​ကောင်း​ဘက်က ကြည့်​မယ်ဆိုရင်​တော့​ ​ငွေ​ကြေး​ဖောင်း​ပွမှု နိမ့်​ကျသွား​တဲ့​သ​ဘောရှိတယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ဘဏ်မှာသွား​အပ်ရင် မရှုံး​ဘူး​ပေါ့​။ ဒီတိုင်း​ထိုင်စား​လောက်​အောင်လည်း​ မရ​သေး​ပါဘူး​။ ဒါ​ပေမယ့်​ သူများ​တွေက ဘာကိုတွက်လည်း​ဆိုရင် ဥပမာ ထိုင်း​မှာရှိတဲ့​ လူတ​ယောက်က သူ့​မှာ ၆ရာခိုင်နှုန်း​နဲ့​ရမယ်။ သူက ဗမာပိုက်ဆံလွှဲပြီး​တော့​ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း​ရတယ်ဆိုရင် သူ့​နေရာကကြည့်​ရင် ဟုတ်တာ​ပေါ့​။ အဲဒီလိုမျိုး​အမြင်နဲ့​ မြင်တာလည်း​ရှိတယ်။ အဲဒီတခုတည်း​ကြည့်​လို့​ မရဘူး​။ ကျ​နော်တို့​က အာဆီယံနဲ့​ ညှိဖို့​ဆိုတာ အကုန်လုံး​ တ​ပြေး​ညီဖို့​ မလွယ်ပါဘူး​။ ကိုယ့်​နိုင်ငံနဲ့​ ကိုယ့်​အ​ခြေအ​နေနဲ့​ ထင်ဟပ်ပြီး​တော့​ အကျိုး​ရှိ​အောင် လုပ်ရတာ​ပေါ့​။ ကိုယ်ကလုပ်ချင်တိုင်း​ လိုက်လုပ်လို့​ ချက်ချင်း​ကြီး​ တ​ပြေး​ညီ​တော့​ မဖြစ်ဘူး​။”
တခြား​နိုင်ငံ​တွေ ဝင်လာပြီး​တော့​ ကိုယ့်​ပြည်တွင်း​ဘဏ်​တွေမှာ ပိုက်ဆံ​တွေလာအပ်တယ်တို့​ဆိုတာ တကယ်​ကော ဖြစ်နိုင်ပါ့​မလား​။
“အနည်း​အကျဉ်း ​တော့​ ရှိမှာ​ပေါ့​။ ဘယ်သူမှ အထုတ်လိုက်လဲပြီး​တော့​ လာပြီး​တော့​မထား​ဘူး​။ အဲဒါကို လဲတာလည်း​ အပြင်မှာပဲ လဲကြတာ​လေ။ သ​ဘောက နိုင်ငံခြား​က ​ဒေါ်လာ​ငွေ တသိန်း​ ယူလာပြီး​တော့​။ မြန်မာကျပ်နဲ့​ ထား​မယ်ဆိုရင် မြန်မာကျပ်နဲ့​လဲ၊​ အပြင်နှုန်း​ထား​နဲ့​ လဲပြီး​တော့​မှ ထား​၊​ ထား​ပြီး​တော့​မှ ပြန်ထွက်သွား​တဲ့​ တန်ဖိုး​ကို ​ဒေါ်လာပြန်လဲ။ အဲဒီ ​ငွေ​ကြေး​ဖောင်း​ပွမှုပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ရမယ်။ အမ်အက်ဖ်တီဘီတို့​၊​ အမ်အိုင်စီတို့​ နိုင်ငံခြား​ငွေ ဘဏ်​တွေရှိတယ်။ အဲဒီမှာအပ်တဲ့​အတိုင်း​ နှုန်း​ပေး​တာမဟုတ်ဘူး​။ ဘဏ်မှာ ထား​ရင် ထား​ထား​တာ​တောင်မှ ​ငွေ​သေစာရင်း​ထား​တာ​တောင်မှ ပိုက်ဆံ​ပေး​ရ​သေး​တယ်။ အတိုး​ကလည်း​ မ​ပေး​သ​လောက်ပဲ။ အဲလိုလာထား​မှာ မဟုတ်ဘူး​။”
အဲဒါဆိုရင် ဘဏ်အတိုး​နှုန်း​ ​လျှော့​ချဖို့​ကို စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​ရှင်​တွေ ​တောင်း​ဆိုတာ ဘာ​ကြောင့်​လဲ။
“အလိုအ​လျောက် ​လျော့​စေချင်တာ။ ဥပမာဆိုရင် ဘဏ်က​နေ ပိုက်ဆံ​ချေး​တာ​ပေါ့​။ လုပ်ငန်း​ရှင်တ​ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊​ လယ်သမား​ပဲဖြစ်ဖြစ်။ သူက အခု ၁၇- ၁၈ ​ပေး​နေတာ။ သူက ၁၀ သာ​ပေး​ရမယ်ဆိုရင် သက်သက်သာသာ လိုချင်တာ​ပေါ့​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဘဏ်ကလည်း​ သူကပြန်ပြီး​တော့​ ​ငွေထား​သူ​တွေကို ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း​ပေး​ပြီး​တော့​ သူက ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း​ပြန်​ချေး​မှ သူစား​ရတဲ့​ပိုက်ဆံက အများ​ကြီး​ စား​ရတာမဟုတ်ဘူး​။ ဘဏ်ကလူကလည်း​ ချက်ချင်း​လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး​။ ​ငွေရှိတဲ့​လူကလည်း​ ပိုက်ဆံ​တွေ ​လျှော့​ချလို့​ရှိရင် ဘယ်ရှိ​တော့​မလဲ။ ​ငွေ​ချေး​တဲ့​လူက​တော့​ အတိုး​သက်သာချင်တာ​ပေါ့​။ အဲဒီသ​ဘောပါ။”
ပဲခူးမြို့က ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေ တစ်အိမ်ထောင် ကျပ်တထောင်နှုန်း အထောက်အပံ့ ရလို့ဦးသိန်းစိန်ကိုကျေးဇူးတင်နေသောကလေးငယ်...
အိုင်အယ်လ်အို တိုင်တဲ့ ကလေးစစ်သား မိခင်ကို စစ်တပ်က ခြိမ်းခြောက်
ကလေး စစ်သား တစ်ဦးကို မိခင်ဖြစ်သူက သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်း တာဝန်ရှိသူတွေထံ သွားရောက် တောင်းခံရာမှာ သူ့ရဲ့သား အကြောင်း အိုင်အယ်လ်အိုကို တိုင်ကြားခဲ့မှု အတွက် မိဘတွေကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချနိုင်ကြောင်း သားဖြစ်သူကိုလည်း သတ်ဖြတ်ပစ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် တနေရာတွင် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က ရိုက်ကူးထားသည့် ကလေးစစ်သားတဦးပုံ ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရွှေလင်ဗန်း ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်သူ အသက် ၁၆ နှစ်သား မောင်အောင်အောင်ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း ကလေး စစ်သားအဖြစ် အဓမ္မ စုဆောင်း ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မောင်အောင်အောင်ဟာ ရွှေဘို တပ်ရင်း ၁၂ မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြောင်း သိရှိတဲ့အတွက် မိသားစုက အခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန် အိုင်အယ်လ်အို ရုံးမှာ တိုင်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အကာကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ သားဖြစ်သူကို သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ စစ်တပ် အရာရှိတွေရဲ့ ခုလို ခြိမ်းခြောက် ခံခဲ့ရ တာဖြစ်တယ်လို့ မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတဦးက RFA ကိုဒီကနေ့ ပြောပါတယ်။ “အဲဒီနောက်ပိုင်း သူ့အမေ လိုက်သွားတဲ့ အခါကျတော့ သူ့သားနဲ့ တရက်ပေးတွေ့တယ်။ တွေ့ပြီး သုံးလေးရက်အကြာမှာ အာပီလို့ခေါ်တဲ့ လုံခြုံရေးဂိတ်က တပ်ကြပ်ကြီး တယောက်က သူ့အမေကို လိုက်ရှာပြီးတော့ ခင်ဗျား ဘာလိုက် ရှုပ်နေတာလဲ။ ခင်ဗျား ဟိုတိုင်ဒီတိုင် လုပ်နေရင်တော့ ခင်ဗျားကိုရော ခင်ဗျားသားကိုပါ ဖျောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီး လာပြီး ခြိမ်းခြောက်နေတယ်” ဒါ့ပြင် အိုင်အယ်လ်အိုမှာ တိုင်ကြားထားတဲ့ အမှုကိုလည်း ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ စစ်တပ် အရာရှိတွေက ခြိမ်းခြောက် ပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “နောက်တခုက ဘာပြောလဲဆိုတော့ သူ့အမေကို တယ်လီဖုန်းခွက် ထိုးပေးတယ်။ ခင်ဗျား အိုင်အဲလ်အို ရုံးကို ဖုန်းဆက်တဲ့။ ခင်ဗျားသား ကျန်းမာကြောင်း၊ ဒီမှာပျော်ကြောင်း၊ အဆင့်မီမီနေနေကြောင်း ဖုန်းဆက်ပါတဲ့၊ နောက်တခုက တိုင်ထားတာကို အမှုပိတ်ပေးပါတဲ့။ သူ့အမေက လုံးဝမဆက်ဘူး။ သားကတော့ ကြောက်နေတယ်။ အမေဆက်ပေးလိုက်ပါ။ အဲသလိုနေနေရင် အမေကော သားပါ သေလိမ့်မယ်။ သားတို့ကို ထောင်ချမယ် လို့လည်း ပြောနေတယ် ဆိုပြီးတော့ ကလေးက အသားတွေတုန်ပြီး ငိုပြောနေတယ်လို့ ပြောတယ်” မိသားစု အနေနဲ့ လောလောဆယ် ကလေးစစ်သားအရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကလေးစစ်သား မောင်အောင်အောင် တပ်ကနေ ထွက်ခွင့်ရရှိအောင် ကြိုးပမ်း နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အိုင်အယ်လ်အို တိုင်တဲ့ ကလေးစစ်သား မိခင်ကို စစ်တပ်က...